Ụdị nwa (566-48-3) HPLC≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Akara (566-48-3)
Rating: SKU: 566-48-3. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike sitere na gram ka usoro nchịkọta nke nwa ochie (CAS 566-48-3), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkọta mma.
Nwa ogwu bụ onye mbụ ahọpụtara, pịnye m, steroidal aromatase inhibitor nke eji na ọgwụgwọ nke estrogen-nnabata ọrịa ara ara na ụmụ nwanyị post-menopausal. Formestane na-egbochi estrogen na-emepụta ọgwụ sitere na steroid ma ọ bụ ndụmọdụ. Ọ na-emekwa dị ka prohormone ka 4-hydroxytestosterone,…
Vidio nke ochie
Ụdị isi ihe bụ isi
aha: Nwa nwa
Nwa nna (566-48-3) iji mee ihe na steroid
Nwa nna (566-48-3), a na-akpọkwa lentaron, aha ọjọọ: 4-hydroxyandrostenedione.
Nwa nna (566-48-3) Njikere
Ụdị kachasị nke ụdị nke a na-ere bụ na listi gel na-edepụta ya ma jiri ya mee ihe na 100-200mgs kwa ngwa. Ndị ọrụ ga-etinye ya n'elu ọcha, kpoo akpụkpọ anụ ma gbanye ya; abụkarị n'apata ụkwụ ma ọ bụ ogwe aka. O weere 1 gaa na 5 nkeji iji kpoo. Ụdị injectable maka ma ọ bụ ọrịa ara ara ma na bodybuilders bụ 125mgs ugboro abụọ kwa izu ma ọ bụ 250mgs otu ugboro kwa izu.
Ịdọ aka ná ntị na nwa
Formestane (CAS 566-48-3) anaghị akpata ọtụtụ ọghọm belụsọ ma emetọ ya. Mgbe ụfọdụ bodybuilders ga-eme mkpesa banyere nkwonkwo akọrọ, ngbanwe ọnọdụ, mgbanwe libido, ma ọ bụ rashes, nke bụ ụdị nke AI niile. Mmetụta ọzọ dị obere bụ HDL (ezigbo) cholesterol, yabụ na ị ga-ekiri nri gị.
Nwa nna bụ ọgbọ nke abụọ, onye a na-apụghị ịgbagha agbagha, onye na-eme ka aromatic aromatase. Ọ na-egbochi enzyme aromatase maka ịtụgharị androgens na estrogens, si otú a gbochie mmepụta estrogen.
Ọrịa arama nwere ike ịbụ estrogen ma ọ bụ na-enweghị isi. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọrịa cancer arahụ bụ mmetụta nke estrogen. Mkpịsị ọbara cancer arabara nke etiti na-adabere na estrogen maka viability. Ya mere nwepu nke estrogen site na ahụ nwere ike ịbụ ọgwụgwọ dị irè maka ọrịa hormone nke nwere ọrịa cancer ara.
Akpadoro nne na nna maka akpanyere ụmụ nwanyị postmenopausal. N'adịghị ka ụmụ nwanyị na-emepụta ihe na-emepụta ọtụtụ estrogen na ovaries, ụmụ nwanyị postmenopausal na-amịpụta ọtụtụ estrogen n'ime anụ ahụ dị n'akụkụ site na enyemaka nke enzyme aromatase. Nwaazụ (566-48-3), onye na-emepụta aromatase, nwere ike inye aka belata mmepụta nke etiti estrogen site na igbochi enzyme aromatase n'ime anụ ahụ (ie adispose anụ ahụ) iji mee ka ọrịa cancer na-egbu egbu.
Otu esi zụta ihe ochie si AASraw
Ngwunye Progesterone (57-83-0)